Factory Tour - Shandong Zhongtian darka Waxyaabaha Co., Ltd
Workshop Steel duubay Cold
Gariiradda Cold la duubay ayaa la soo saaray oo ku saabsan xawaaraha sare 6Hi ku daqiijin jireen rogid waxaa sopplied noo by in tayada labada buuxa adag iyo annealed condition.Superior dusha of gariiradda qabow ogolaan codsi ballaaran sida substrate for daahan biraha (galvanized) galvalume, wax ceeriin for tuubooyinka, tuubooyinka, durbaan / albaabka alaabta birta / iyo injineernimada kale guud isticmaalaa.
Workshop steel Galvalume Hot rusheeyey
Gariiradda steel Galvalume waa wax soo saarka oo aad uula mid tahay steel galvanized laakiin la iska caabin ah daxalka wanaagsan (ilaa 3 jeer nolosha ee galvanized) .Waxaa guryaha supperior of galvalume kac ka kooban gaarka ah (43.5% amayno, 1.5% Si, 55% AL ) dahaadhka macdan ah. Arjiyada waxaa ka mid ah waxyaabaha saldhiga saqafka for pre-rinjiyeynta.
Workshop steel galvanized Hot Laydhka
Galvanized Steel gariiradda waxaa la soo saaray iyada oo loo marayo geedi socodka ka mid ah daahan birta oo ku lug marayay gariiradda qabow soo giringiriyey iyada oo kidhligii ka kooban zinc la shubay. Marxaladani waxay hubisaa in Amda ee Zinc in ay dusha sare ee sheet bir ah. Lakabka Zinc wuxuu bixiyaa iska caabin ah daxalka u fiican iyo nolosha adeeg dheerayn. Maquufin kulul galvanized waxyaabaha hubkaas ayaa loo isticmaalaa qalabka guryaha, gaadiidka, wax soo saarka weelka, saqafka, wax saldhig for pre-rinjiyeynta, ducting iyo codsiyada kale ee la xiriira dhismaha.
Color dahaarka Workshop steel
Gariiradda Pre-rinji waxa soo saarey daahan lakabka ah ee rinjiga dushiisa of gariiradda qabow giringiriyey, galvanized ama galvalume. Racfaanka bilicsanaanta iyo cimri dherer tahay sifooyinka ugu muhiimsan ee midab dahaarka gariiradda steel. Doorashada A balaadhan oo ah midabada waa la heli karo si ay macaamiisha iyo rinjiga loogu talagalay inay la kulmaan isticmaalka dhamaadka gaar ah loo cayimay ayaa laga yaabaa. Gariiradda pre-rinji waa ku haboon gudaha si toos ah iyo sidoo kale codsiga bannaanka, darfahoodii rooti iyo wixii la mid ah.
sheet saqafka Corrugation Workshop-jiingado
Warehouse oo shixnad